Posted on August 12, 2019 by Qeerroo
Oromiyaa Lixaaf Oromiyaa Kibbaa qaamni Mootummaa afaan Qawween bulchaa abbaa barbaadu manaa gadi waamee ajjeesuu irratti argama. Akkuma kana Kibba Baha Oromiyaa Baalee keessatti ammoo rakkoo dinagdee Mootummaan dhalcheen uummatni keenya miliyoonaan lakka’amu Beelaaf saaxilameera. Wayiita uummatni keenya beelaaf kaadhimamee jirutti maqaa uummata keenyaatiin qaamni mootumma deggarsa biyyoota garaagaraa irraa argataa jira. Deggarsa maqaa uummata Beelaa’aa jiruun argatuun garuu uummatni keenya akka gargaaramu gochuu irra Rasaasaa fi Qawwee of hidhachiisee uummata nagaatti waraana banee jira.
Nuti Qeerroon Bilisummaa Oromoo deemsa olii kanaan jechuun adeemsa Beelaan wal qabatee qaamni mootummaa yakka lama Oromoo irratti raawwataa jira jennee amanna. Yakki jalqabaa uummata Oromoo maqaa saboota ollaan daheeffatee qee’ee isaarraa waraana isaan kan buqqaase mootummaa EPRDF ta’uu fi yakki lammataa maqaa uummata qe’ee irraa buqqaa’ee beelaan dhumaa jiruun gargaarsa argatuun Qawwee fi rasaasa bituudhaan yakka waraanaa Oromiyaa irratti banee jiraachuu hubatna. Kanaaf yakkoota kanaaf qaamni bu’uura ta’eef hirmaataan rakkinicha uumuu keessatti gahee qabu mootummaan EPRDF gaafatama jalaa bahuu hinqabu. Kana malee: hidhaan ilmaan Oromoo irratti ka duraan ol adeemaa jira, dargaggeessi hojii misoomaa danqamee, qore bulaan hojii misoomaa danqamee jira.
Yakkootni Oromoo irratti bara kana keessa raawwataa jiran daangaa godhachuu dhabuun, ajjeechaan Kaaba Oromiyaa Walloo qabatee nu Oromoo irratti adeemaa bahe qaama walabaan qoratamuu qaba. Bara kana keessa lubbuu kumootaan lakkaa’amu dhabdee kan jirtu Oromiyaan, yakkoota daguuggaa sanyiif saaxilamnee jiraachuu keenya nii hubanna. Kana malees hanga ammaa waraanni mootummaa fandalalaa ta’uudhaan mana Oromoo akka barbaade gubee barbadeessaa jira. Kun ammoo olaantummaa seeraa cabsuu keessaa isa hangaafati.
Qaamni olaantummaa seeraa fi heera biyyatti cabse gaafatama godhachuu qaba ejjennoo jedhun jabeessinee gaafanna. Manneen Oromoo Lixa Oromiyaa, Iluu Abbaa Booraa fi Kibba Oromiyaatti waraana EPRDF’n gubatan bara kana gara Kumaatti lakkaa’amu. Kun yakka ciigasiisa addunyaa kana irratti raawwatee hinbeeknee fi Oromoo sirna kam keessattu akkas gidiramee hinbeeku jennee fudhanna.
Walumaa gala gochaawwan badaan waraanni mootummaa uummata keenya Oromoo irratti raawwataniif gaafatamni jiraachuu akka qabu gaaffii keenya ka duraan olitti bara itti aanuttillee gaafachuuf nuti Qeerroo Bilisummaa Oromoo qophii ta’uu keenya hubachiifna!
Pingback: Aarsaa Gurguddaa Oromoon Har'a Kaffalaa Jirruuf Gaafatamni Jiraachuu Qaba -
Pingback: Aarsaa Gurguddaa Oromoon Har'a Kaffalaa Jirruuf Gaafatamni Jiraachuu Qaba Kichuu